Wenger Oo Xaqiijiyey In Gabriel Uu Muddo Cayiman dhaawac maga maqnaan doono Arsenal
HomeWararka MaantaWenger Oo Xaqiijiyey In Gabriel Uu Muddo Cayiman dhaawac maga maqnaan doono Arsenal
Maamulaha kooxda Kubadda cagta Arsenal ee Arsene Wenger ayaa sheegay in difaacyahanka kooxdiisa ee Gabriel uu garooramada dhaawac kaga maqnaan doono ugu yaraan muddo saddex toddobaad ah, iyadoo dhaawac muruqa ah uu haleelay ciyaartii Arbacada ee Arsenal ay 2-1 ku garaacday QPR.
Gabriel oo ay bishii January ka soo iibsatay Arsenal naadiga reer Spain ee Villarreal ayaa waxa uu kooxdiisa la bilaabay ciyaartii labaad, iyadoo uu booska ka cidhiidhsaday Per Metesacker oo khadka difaaca difiicnimo ka muujiyey kulamadii u dambeeyey. Hase yeeshee, Gabriel nasiib darro ayaa heshay markii daqiiqaddii 37aad ay ciyaartu maraysayna beddel ayuu garoonka kaga baxay iyadoo uu Laurent Koscielny garoonka soo galay.
“Ma garanayno, laakiin waa arrin xun. Caadiyan waxay u muuqataa in uu dhaawiciisu qaadan doono 21 maalmood” sidaas ayuu Wenger u sheegay saxafiyiin waraystay markii ay ciyaartu dhamaatay.
Arsenal ayaa guul ay ku faraxday ka gaadhay kooxda QPR iyadoo labada gool ee ay guushu ku raacdayna ay u dhaliyeen Olivier Giroud iyo Alexis Sanchez ka hor intii aanu Charlie Austin wakhti dambe gool u dhalinin QPR.
Kooxda tababare Wenger ayaa waxa ay horyaalka kaga jiraan kaalinta saddexaad, iyagoo afar dhibcood ka hooseeya Manchester City oo kaalinta labaad ku jirta.
‘Morata wuxuu rabaa Juventus – ee ma rabo Madrid’
Martin Atkinson Oo Loo Doortay Garsooraha Labada Madrid Ee Semi Finalka Champions League
30/04/2017 Abdiwahab Ahmed
Man City 3-1 Everton (agg 4-3)… Aguero Oo Finalka Wembley u diray kooxdiisa